လော ရှည် - က တဲ့ ပွဲ: ရုံးချိန်၊ ကျောင်းချိန်အတွင်း ဖုန်းဆက်ကြသူ/G-talkတုံကြသူ မိတ်ဆွေများသို့
ရုံးချိန်၊ ကျောင်းချိန်အတွင်း ဖုန်းဆက်ကြသူ/G-talkတုံကြသူ မိတ်ဆွေများသို့
"ဟဲလို၊ အားလား၊ ဘာလုပ်နေလဲ။"
စာရေးသူအပါအ၀င် သုတေသန ကျောင်းသား (Research Students) များနှင့် သုတေသန လက်ထောက် (Research Assistents) အားလုံးကို အကြောင်းထူး တစုံတရာ (ကြက်/၀က်တုတ်ကွေးမိခြင်း၊ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ဘာသာရပ်ဆိုင်ရာ ဆွေးနွေးပွဲ တက်ခြင်းစသည်) ရှိသည်မှလွဲ၍ တနင်္လာမှ သောကြာအထိ နံနက် ၀၉၀၀ နာရီမှ ညနေ ၁၇၀၀ နာရီအထိ သက်ဆိုင်ရာ သုတေသနခန်းမ (lab) များတွင် ရှိနေသင့်သည်ဟု စာရေးသူတို့ကျောင်းက အကြံပြုထားပါသည်။ စာရေးသူမှာ ကျောင်းနောက်ကျလေ့ရှိသဖြင့် နံနက် ၁၀၀၀ နာရီမှ ညနေ ၁၈၀၀ နာရီအထိ၊ (လိုအပ်လျှင် ည ၂၂၀၀ နာရီ၊ ၂၃၀၀ နာရီအထိ) သုတေသနခန်းမထဲတွင် စာကြည့်/အလုပ်လုပ်နေလေ့ရှိသည်။ ထိုအချိန်တွင် တလောကလုံးက စာရေးသူ၏ မိတ်ဆွေများသည် ဖုန်းတဂွမ်ဂွမ်ဆက်ကြသည်၊ G-talk တတုံတုံ လုပ်ကြသည်။
စာကြည့်ချိန်/အလုပ်ချိန်တွင် စာရေးသူ ဖုန်းမပြောလို၊ G-talk မ chat လိုပါ။ သို့ရာတွင် အရေးပေါ် ကိစ္စရပ်များ (သာရေး၊ နာရေး၊ ထူးခြားသတင်းနှင့် မိတ်ဆွေများအတွက် အရေးပေါ် အကူအညီ စသည်တို့) အတွက် ဖုန်းနှင့် G-talk ကို ဖွင့်ထားလေ့ရှိသည်။ အလုပ်ချိန်အတွင်း ဖုန်း/G-talk ဖွင့်ထားသည်မှာ မိတ်ဆွေတို့လိုအပ်တတ်သော အရေးပေါ် ကိစ္စများအတွက်သာ ဖြစ်သည်။ နေကောင်းလား၊ ထမင်းစားပြီးပြီလား၊ ဘာနဲ့စားသလဲ၊ တရုတ်စာကို တူနဲ့စားသလား၊ ကုလားစာကို လက်နဲ့တွယ်သလား၊ အသားတုံးက ကြီးလား၊ သေးလား၊ ဘယ်နှဖတ်ပါသလဲ လျှောက်မေးပြီး အာရိုက်ရန်မဟုတ်။ စာကြည့်ချိန်/အလုပ်ချိန်တွင် စာကြည့်မည်/အလုပ်လုပ်မည်။
မိတ်ဆွေတို့ နားလည်ရမည်မှာ စာရေးသူတို့ သုတေသန အလုပ်ဆိုသည်မှာ လေအေးပေးစက်တပ် အခန်းထဲတွင် အင်တာနက် ကြည့်နေခြင်း မဟုတ်ပဲ စာဖတ်ရခြင်း၊ တွေးတောကြံဆရခြင်း၊ တွက်ချက်ရခြင်း၊ ကွန်ပျူတာ အစီအစဉ်များ (computer programs) ရေးဆွဲရခြင်း၊ စမ်းသပ်မှု (experiment) ကို စောင့်ကြည့်ရခြင်း စသည်တို့ကို ပြုလုပ်ရပါသည်။ စာရင်းကိုင်လို ဂဏန်းတစ်လုံးပေါင်းလိုက်၊ လက်ဖက်သုပ် ထစားလိုက်၊ နောက်တစ်လုံးပေါင်းလိုက်၊ အတင်းတုတ်လိုက် လုပ်လို့ရသော အလုပ်မျိုး မဟုတ်ပါ။ ထိုအချိန်တွင် ဖုန်းလာပါက များသောအားဖြင့် စဉ်းစား စိတ်ကူးထားသမျှ အကြံအစည်သစ်၊ အကြံအစည်ကောင်းမှန်သမျှတို့သည် ဖုန်းသံမြည်သည့်ခဏ/ဖုန်းကိုင်သည့်ခဏတွင် ခေါင်းထဲမှ အပြီးထွက်လေသည်။ (ဘယ်တော့မှ ပြန်မလာတော့ပါ။) တနည်းအားဖြင့်ဆိုသော် မိတ်ဆွေ၏ ဖုန်းမြည်သံ/G-talk တုံသံကို ကြားရခြင်းသည် စာရေးသူ၏ ကျောင်းစာ/အလုပ်အတွက် အလွန်ပင် ထိခိုက်လေသည်။ မိတ်ဆွေတို့၏ အရေးပေါ်ကိစ္စများအတွက် စာရေးသူ၏ အလုပ်ကို ထိခိုက်ခံ၍ ဖုန်းကိုင်ရခြင်း/G-talk ဖွင့်ထားရခြင်းဖြစ်ကြောင်း နားလည်ပေးကြပါ။
စေတနာကို အစော်ကားဆုံးသူတို့မှာ အပေါ်က ဥပမာပြခဲ့သလို ဖုန်းဆက်ပြီးမှ ဘာဆိုဘာမှ မပြောပဲ ဖုန်းကို ချပစ်သူ/G-talk မှာ Hi, are you free ? လာလုပ်ပြီး ဆက်မပြောတော့သူတို့ ဖြစ်လေသည်။ ၄င်းတို့ အကြောင်းပြချက်မှာ "စာကြည့်နေ/အလုပ်များနေသဖြင့် အားနာလို့"။ စာကြည့်ချိန်/အလုပ်ချိန်ကြီး ဖုန်းဆက်ပြီးမှ/တုံပြီးမှ အားနာသည် ဆိုသည်ကို ဘယ်လို နားလည်ရမှန်းမသိပါ။ အားနာလျှင် အစကတည်းက မဆက်ပါနှင့်လား/မတုံပါနှင့်လား။ ဖုန်းသံကို ကြားကတည်းကပင်/တုံသံကို ကြားကတည်းကပင် အလုပ်က ပျက်ပြီးပြီ မဟုတ်ပါလား။
ပို၍ဆိုးသည်မှာ အားနာသည်ဆိုပြီး ဘာမှပြောမသွားခြင်းပင် ဖြစ်သည်။ ဒီနေရာမှာ အတွေးတွေ ပွားရသည်။ ဒီမိတ်ဆွေ ဘာဖြစ်လို့လဲ၊ သူ့ကလေး နေမကောင်းဘူးလား၊ သူ့အမေသေပြီလား၊ သူနေမကောင်းတာ ဆေးခန်းမသွားနိုင်လို့များလား၊ အိမ်မှာ ချော်လဲနေတာလား … လား … လား။ စိတ်ပူရသည်။ ထပ်ဆင့် ထပ်ဆင့် ထပ်ဆင့် စာကြည့်ပျက်/အလုပ်ပျက် ပါသည်။ အနစ်နာခံ၍ ဖုန်းကို ကိုင်ပေးပြီးမှတော့ ပြောသွားပါတော့လား။ မပြော၊ သို့သော် နောက် ၁၀ မိနစ်နေသောအခါ ပြန်ဆက်လာသည်။ "အားပြီထင်လို့" … တဲ့။ (ကောင်းကြသေးရဲ့လား။) စိတ်ကူးသစ်၊ အကြံသစ်တို့သည် ပျောက်ပျက်သည်မှာ ၂ ခိရှာ၊ ၂ ခါရှိပါတော့သည်။ (ဒါကျ အားမနာကြဘူး။)
လွယ်လွယ်ပြောရလျှင် စင်ကာပူ စံတော်ချိန် ၁၀၀၀ နာရီမှ ၁၈၀၀ နာရီ (မြန်မာစံတော်ချိန် ၀၈၃၀ မှ ၁၆၃၀) အတွင်း စာရေးသူ မအားပါ။ ဖုန်းဆက်ပြီးလဲ မမေးနှင့်၊ G-talk မှာလဲ မမေးနှင့်၊ အသေသာ မှတ်ထားကြပါ။ ထိုအချိန်အတွင်း စာရေးသူ မအားပါ။ အာရိုက်ရန် ဖုန်းဆက်သူ/G-talk မှာ လေပန်းသူတို့ကို ပထမတစ်ခါ သတိပေးပါမည်။ မလိုက်နာပါက တပါတ်တန်သည်၊ တလတန်သည် Ban/Block ပါမည်။ (စာရေးသူ၏ ဖုန်းမှာ Ban လုပ်လို့ရသော Function ပါပါသည်။) ထိုအချိန်အတွင်း ချက်ချင်း မပြောလျှင်မဖြစ်သော အရေးကြီးကိစ္စများမှအပ မည်သည့်ကိစ္စအတွက်မျှ ဖုန်းမဆက်ပါနှင့်။
ဖုန်းဆက်ခဲ့ပြီးမှ ဖုန်းကိုင်လျှင် မိတ်ဆွေကို အချိန် အနည်းငယ် ပေးနိုင်၍ ဖြစ်သည်။ ပြီးအောင် ပြောသွားပါ။ ပြောရမှာ ရှည်သဖြင့် အားနာလျှင် ဘယ်အချိန် ပြန်ဆက်မည် ချိန်းဆိုသွားပါ။ စာရေးသူ အချိန် လုံးဝ မပေးနိုင်လျှင် ဖုန်းကို မကိုင်ပါ/G-talk ကိုလဲ ပိတ်ထားပါမည် (သို့မဟုတ်) ဖုန်းကိုင်ပြီး ဘယ်အချိန် ပြန်ဆက်ပါဟု ပြောပါမည်။ ဖုန်းကိုင်သောအခါတွင် ဘာမှ မပြောခြင်းသည် အိမ်ဦးခန်းတွင် သေးပန်းပြီးမှ သူများအိမ်ဦးမှာ အီးပါရမှာ အားနာလို့ အိမ်သာလေးပြပါဟု ပြောတာနဲ့ တူတူပဲ ဖြစ်လေသည်။ ထိုသို့လုပ်သူများကိုလဲ ပထမတစ်ခါ သတိပေးပြီး မလိုက်နာပါက Ban/Block ပါမည်။
မှတ်ချက် ။ ။ မည်သူ့ကိုမျှ စောင်းရေးခြင်း မဟုတ်ပါ။ တည့်တည့်ကြီး ပြောခြင်းဖြစ်သည်။ ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် သိကြပါ။
Posted by Law Shay at 12:25 AM
အမလေး။ လန့်လိုက်တာ။ ဒီပို့စ် ကို ဖတ်ရတာ :P
မလန့်ပါဘူး. တို့မှ မဆက်ဘဲ။ ပြောချင်ရာပြော. ကြောက်ဘူး။
အော် ....ပိတ်ထားပါတော့လား၊အေ၇းကြီး ရင် ပြန်ဆက်ကျပါ လိမ့်မယ်။
ရန်ကုန်က မိသားစုနဲ့ အမြဲ ဆက်သွယ်နေရပါသဖြင့် Invisible လုပ်ထားရန် မဖြစ်နိုင်ပါ။
ရန်ကုန်မှ သူငယ်ချင်းများကို ကျောင်းကိစ္စ၊ အလုပ်ကိစ္စ အမြဲ ကူညီနေရသဖြင့်လဲ invisible လုပ်ထားမရပါ။ ဖုန်းလဲ ပိတ်ထားမရပါ။
အလုပ်များနေချိန်တွင် G-talk ကို နီထားပါသည်။
အခုဟာက အလိုက်ကို မသိတဲ့ အားလား မေးဖို့လောက် ဖုန်းဆက်တဲ့လူတွေအတွက် ရေးထားတာဖြစ်ကြောင်းပါ။
စာရင်းကိုင်လို ဂဏန်းတစ်လုံးပေါင်းလိုက်၊ လက်ဖက်သုပ် ထစားလိုက်၊ နောက်တစ်လုံးပေါင်းလိုက်၊ အတင်းတုတ်လိုက် လုပ်လို့ရသော အလုပ်မျိုး မဟုတ်ပါ။
စာရင်းကိုင်တွေက အဲ့လိုမျိုး လုပ်လို့ရလို့လားဟင်........
ဒါဆိုရင် ဟိုလို စာရင်းတွေ ကိုင်ရတာဖြစ်မယ်ထင်တယ်နော်....... :P
LONE WA MA SAT BU